Fomba tsora hikarakaràna henan-kisoa sy ravintoto – jEreo Ato
Publié le 24 mai 2019 24 mai 2019 - 1 minute de lecture Catégories CuisineÉtiquettes Henan-kisoa, Ravintoto
Na dia efa maro aza ny mahay ny fomba fandrahoana ity sakafo iray ity, dia tsara ihany raha mba zaraina amintsika fa mety misy ny mbola tsy mahay. Koa manasa anao ary hanaraka izany fomba fandrahoana azy izany hatramin’ny farany.
1- Zavatra ilaina:
– Henan-kisoa matavy
– Tongolo gasy
2- Ny fomba fikarakarana azy
Voalohany indrindra dia alaina ny henan-kisoa matavy dia tetehina madinika tsara. Rahefa vita tetika ilay izy dia sasàna madio tsara. Avy eo handrahoana amin’ny rano 250ml ilay henan-kisoa.
Mandrapahamasak’ilay henakisoa dia alaina ilay ravintoto. Totoina raha ohatra ka mbola tsy vita toto. Rehefa vita izay dia arotsaka ao amin’ilay hena. Raha ritra moa ilay izy dia ampiana rano 500ml. Avy eo tanehina tsara amin’ny afo mahery.
Manarak’izay, kikisana ilay tongolo gasy na totoina dia arotsaka ao amin’ny nahandro. Tohizana hatrany ny tanika ary atao mahery ny afo. Tsy hadino ny manisy sira ny laoka sy ny manafangaro azy tsara.